Tetikasa Ambatovy: tsy atao ambanin-javatra ny fanofanana ny mpiasa | NewsMada
Tetikasa Ambatovy: tsy atao ambanin-javatra ny fanofanana ny mpiasa
Vaindohan-draharahan’ny Tetikasa Ambatovy ny ahafahan’ny mpiasa manatratra ny tanjona apetraka ahazoana vokatra tsara. Hanatanterahana izany ny fanofanana tsy tapaka ny mpiasa isan-tsokajiny avy.
Misy ny toerana manokana any Toamasina, hanofanana ny mpiasa, arakaraka ny sokajin’asa sy andraikitra ananany avy, hanamafisana ny fahaiza-manao sy ny traikefa. Hampazoto azy ireo sy hanatsara ny fahaiza-manaony sady hahafahany mahazo andraikitra ambony kokoa avy eo. Malagasy miisa 69 ny miantoka izany ka enina ny vahiny. Tsara marihina fa efa Malagasy avokoa ny 93%-n’ny mpiasa mivantana sy tsy mivantana (maherin’ny 10.000) ao amin’ny Tetikasa Ambatovy.
Raha fintinina, misy karazany dimy lehibe ny fanofanana mikasika ny lafiny teknika sy ny tsy teknika ao amin’ity orinasa ity, anisan’ny sambany ahitana ny toy izany eto Madagasikara. Voalohany, mikasika ny aroloza sy ny fahasalamana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny orinasa manara-penitra, mba ho tompon’andraikitra sy manaraka ny fepetra mifehy ny orinasa ny mpiasa tsirairay. Faharoa ny fiofanana hifehezana ny pitsompitsony teknika amin’ny famokarana samihafa ao amin’ny ozinina fanodinana nikela sy kobalta.
Fikojakojana ny fitaovana
Fahatelo ny fomba fikojakojana ny fitaovana samihafa, miainga amin’ny vaventy ka hatramin’ny madinika indrindra, satria saropady avokoa ny fifehezana azy ireny. Fahefatra ny any amin’ny fitrandrahana ny nikela sy kobalta, ny fampiasana sy ny fikojakojana ny fitaovana any amin’ny toeram-pitrandrahana any Ambatovy Moramanga.
Fahadimy ny lafiny fitantanana, fitarihan’olona, fandaminana asa sy fandrafetana fandaharanasa na tetikasa na paikady. Eo koa ny fifehezana ny teny vahiny, indrindra ny teny anglisy fiteny tena ampiasaina amin’ny lafiny rehetra. Manampy ireo ny fanoroana lalana ho an’ireo mety hiova andraikitra.
Tsiahivina fa misy koa ny fanofanana manokana ireo mpiasa mamily ny fitaovana vaventy mitrandraka ny akoran-tany any Ambatovy Moramanga, ary misy vehivavy malagasy amin’izy ireo.